श्रीमान बिदेशमा श्रीमतीले नेपालमा गरिन् यस्तो! समय दिएर पढ्नुहोस् – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/श्रीमान बिदेशमा श्रीमतीले नेपालमा गरिन् यस्तो! समय दिएर पढ्नुहोस्
श्रीमान बिदेशमा श्रीमतीले नेपालमा गरिन् यस्तो! समय दिएर पढ्नुहोस्
मेरो श्रीमान् माल्दिभ्समा हुनुहुन्छ । उहाँलाई वि;दाइ गर्दा मैले घर व्यवहार म मिलाउँछु चिन्ता नर्गनु भनेको थिएँ । सम्बन्ध भनेको विश्वास त हो नि उहाँलाई मैले घर सम्हाल्छु भनेर विश्वास दिलाएर पठाएँ पछि त मैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नै पर्‍यो ।घर व्यवहार राम्रोसँग चलाउने तरिका नजान्दासम्म सजिलो चाहिँ हुदो रहेनछ |
श्रीमानले विदेशमा कमाएको त जोगाउन पर्छ भन्ने भएपनि जोगाउने तरिका नजान्दा भने जस्तो भएको थिएन ।चार महिना अघि गाउँमा विदेशमा हुनेका परिवारलाई वि;त्तीय साक्षरताका कक्षा सञ्चालन हुने भयो । कक्षामा आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापनका साथै विभिन्न व्यवहारिक ज्ञान सिकाइन्छ भन्ने कुरा सुनें ।त्यसपछि म पनि यो कक्षामा बसें ।
यो कक्षामा बसेपछि मैले आम्दानी के हो र खर्च के हो भन्ने कुरा बुझें ।आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन गरेर कसरी बचत गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकें ।मसँग आम्दानीको स्रोत त केही थिएन । त्यसपछि मैले आम्दानीको बाटो खोजें । माइतीमा आमा बुवाले टिका लगाएर दक्षिणा दिएको पैसा पनि जोगाउन थालें । श्रीमानले खर्च गर भनेर पठाएको पैसा पनि धेरथोर बचाउन थालें ।त्यसरी बचाएको पैसाले एउटा बाख्रा किनेको छु ।
अब विस्तारै बाख्रा थप्दै जाने मन छ । खेतबारीमा तरकारी खेती पनि बढाउन थालेका छौं । परिवारका सबै सदस्य मिलेर तरकारी खेती गर्छौं । सिजनको बेला त राम्रै आम्दानी पनि हुन्छ । तरकारी खेतीले घरख;र्च पुर्‍याउन पाए विदेशमा कमाएको बच्थ्यो भन्ने लाग्छ । वित्तीय साक्षरताको कक्षामा बसेपछि त मैले श्रीमानसँग फोनमा बोल्दा हुने खर्च पनि घटाएको छु । पहिले महिनाको ७ सय ख;र्च गर्दो रहेछु ।
कहिल्यै पनि नछुनुहोस् आफ्नै श्रीमतीका पनि यी अंग, नत्र जीन्दगी…
गुल्मीमा १४ वर्षे छोरी गर्भवती, कस्ले गर्यो भनेर सोध्दा, उनले आफ्नै बुवालाई देखाएपछि….
नासाले यान पठाउँदै, जसले पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई १० करोड रुपैयाँ दिन सक्छ !
अस्ट्रेलियामा मिलिपेड्स ‘अरिमठ्ठे’को नयाँ प्रजाति भेटियो, जसका १३ सय ६ वटा खुट्टा छन्